ဂျြောဂြီယနျအွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များ - အွန်လိုင်းကာစီနိုအပိုဆုကုဒ်များ
(946 ပျမ်းမျှအားမဲ: 5.00 )5ထဲက
Loading ...ဂျော်ဂျီယာလောင်းကစားဝိုင်းဿုံဥပဒေရေးရာဖြစ်ပါတယ်ရှိရာတောင်ပိုင်းကော့ကေးဆပ်ပြည်နယ်အတွက်အနည်းငယ်နိုင်ငံတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ တိုင်းပြည်အတွင်းလောင်းကစားစက်မှုလုပ်ငန်းနောက်ကျောကိုပထမဦးဆုံးလောင်းကစားရုံ Tbilisi ဖွင့်လှစ်သည့်အခါ NEP လကျထကျမှစတငျ။ သို့သော်သူတို့ (သုံးနှစ်က) ရှည်လျားတည်ရှိခြင်းနှင့်တဖြည်းဖြည်းဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအားလုံးကိုလောင်းကစားဝိုင်းလှုပ်ရှားမှုများပိတ်ပင်ထားသောအခါမေလ 1928 က၎င်း၏လှုပ်ရှားမှုများလှည့်။
ထိုအချိန်တွင်နှစ်ဦးစလုံးအိမ်နီးချင်းတူရကီ, ရုရှားနှင့်အဇာဘိုင်ဂျန်ထဲမှာ, လောင်းကစားဝိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဟာအလွန်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေ၌တည်ရှိ၏, ဂျော်ဂျီယာကာစီနိုလောင်းကစားရုံအားလုံးနေရဆဲမှပွင့်လင်းကြသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေလောင်းကစားဝိုင်းများ၏ပြဿနာနှင့်လောင်းကစားနဲ့ဆက်စပ်အထူးသဖြင့်ပြဿနာတွေ, အဆက်မပြတ်မြင့်တက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ တိုင်းပြည်မှန်မှန်လောင်းကစားများ၏အနုတ်လက္ခဏာဘက်အကြောင်းကိုဥပဒေပြုခြင်းနှင့်သာမန်နိုင်ငံသားတွေအကြားဆွေးနွေးချက်ခဲ့။
ထိပ်တန်း 10 ဂျြောဂြီယနျအွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များများစာရင်း
အပြုသဘောလူအတော်များများဟာသူတို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးလှုပ်ရှားမှုများတစ်ဦးအဖြစ်လောင်းကစားကိုရှေးခယျြလောင်းကစားနှင့် ပတ်သက်. လူဦးရေရဲ့အထွေထွေအမြင်။ မကြာသေးမီကကိစ္စတွင်လေ့လာမှုဂျြောဂြီယနျလူဦးရေအပြုသဘောလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်ဆက်စပ်သောကြောင်းအတည်ပြု။ ဂျြောဂြီယနျကာစီနိုလောင်းကစားရုံအများကြီးလိုအပ်နေသောနိုင်ငံခြားမတည်ငွေရင်းကိုဆွဲဆောင်ကြောင်းနားလည်ပြီး, ကခရီးသွားဧည့်ကစားသမားတွေအတူ။
ဂျြောဂြီယနျပါလီမန်လက်ရှိလောင်းကစားများ၏ဆိုးကျိုးများကိုအသေးအဖွဲရည်ရွယ်တစ်ဥပဒေမူကြမ်းစဉ်းစားနေပါတယ်။ အဆိုပါအဆိုပြုချက်ကိုအဓိကအားအကောင့်လစာသို့ယူပြီး, ဒေသခံလူဦးရေ၏လောင်းကစားရုံများနှင့်အခြားလောင်းကစားအဖွဲ့အစည်းများဝင်ရောက်ခွင့်များ၏ကန့်သတ်နိုင်ဖို့ပြောပြတယ်။ ကိုယ်ကသာအဘယ်သူ၏လစာမှာအနည်းဆုံး 500 gel ရောက်ရှိနှင့်သူတို့၏ဘဏ်စာရင်းအပေါ် 5000 gel ထက်လျော့နည်းရှိသည်မဟုတ်သူတို့အားနိုင်ငံသားများမှလောင်းကစားခွင့်ပြုပါရန်အဆိုပြုထားသည်။ အဆိုပါအဆိုပြုချက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားအောက်တွင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
ဂျော်ဂျီယာတွင်အွန်လိုင်းလောင်းကစားလုံးဝဥပဒေရေးရာဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်၌ဤကဏ္ဍ၏အထူးအင်္ဂါရပ်လုနီးပါးအားလုံးမြေယာ-based ကာစီနိုလောင်းကစားရုံ၎င်းတို့၏အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံဆိုဒ်များရှိသည်သောအချက်ဖြစ်ပါသည်။ ဂျော်ဂျီယာတွင်အွန်လိုင်းလောင်းကစားများ၏ဥပဒေနှင့်အညီလိုင်စင်ရယူဘို့အခြေအနေအတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့များမှာကတည်းကဂျော်ဂျီယာ၏အွန်လိုင်းလောင်းကစားစက်မှုလုပ်ငန်း, ဒေသခံနှင့်နိုင်ငံခြားအော်ပရေတာများ၏အရေအတွက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ ဂျော်ဂျီယာတွင်အွန်လိုင်းလောင်းကစားတဲ့ဂိမ်း Play ကိုအင်တာနက်နှင့် set ကိုချိတ်ဆက်ထားပြီးကွန်ပျူတာများနှင့်အတူအခန်းပေါင်းကိုယ်စားပြုအထူးအပြန်အလှန်ကလပ်နိုင်ပါတယ် ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံက်ဘ်ဆိုက်များ stvu ။
ဂျြောဂြီယနျထိုကဲ့သို့သောကလပ်များတွင်အွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံမှာကစားရန်ကိုချစ်ပေမယ့်ယခု ပို. ပို. လူတွေကိုဒီရည်ရွယ်ချက်အဘို့မိမိတို့အိမ်တွင်းစက်ကိုအသုံးပြုနေသည် - ဒါကြောင့်အပေါ်ကွန်ပျူတာများ, မိုဘိုင်းဖုန်းများနှင့်။
မကြာသေးမီကဂျော်ဂျီယာ၏ပါလီမန်တိုင်းပြည်အတွင်းလောင်းကစားများ၏ကြော်ငြာပိတ်ပင်ဖို့ပဏာမခြေလှမ်းအဖြစ်ယူဆ။ အဆိုပြုချက်ကိုပညတ်တရား၏အင်အားကိုရရှိပါလိမ့်မယ်, နှင့်ကန့်သတ်လည်းအွန်လိုင်းလောင်းကစားအကျိုးသက်ရောက်စေသောဖြစ်ရပ်၌တည်၏။ ဒါ့အပြင်အဆိုပြုချက်ကိုအသေးစား၏နှစ်အောက်ပုဂ္ဂိုလ်များ၏လောင်းကစားဝိုင်းအတွက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကျော်ကပိုတင်းကြပ်ထိန်းချုပ်ပေးနှင့်အော်ပရေတာများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အပေါ်မည်သည့်လက်မခံနိုင်သောအပြုအမူများအတွက်ပိုမိုမြင့်မားဒဏ်ငွေ။
ဂျော်ဂျီယာအွန်လိုင်း - ဂျော်ဂျီယာမှာရှိတဲ့လောင်းကစား
ဂျော်ဂျီယာ - လှပသောသဘာဝနှင့်အပန်းဖြေနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အခြေအနေများနှင့်အတူတစ်နေသာနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ ဒေသခံလူထုပုံပြင်များနှင့်အစားကောင်းကြိုက်သူများအတွက်အစားအစာအဖြစ်လူအများ၏ဧညျ့လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှလူတို့နှင့်အတူဤတိုင်းပြည်ရန်ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မြေယာ-based format နဲ့လောင်းကစားများအတွက်အခြေအနေများ, နှင့်အွန်လိုင်းဂိမ်းကိုခံစားဖို့လုံလောက်တဲ့ခွင့်ပြုပါ။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့နောက်ပိုင်းမှာအကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ CasinoToplists Tbilisi ထံသို့စေလွှတ်!
ဂျော်ဂျီယာမြေကွက်-based ကာစီနိုလောင်းကစားရုံဂိမ်းကိုအင်တာနက်အပေါ်တစ်ဦးရှိနေခြင်းရှိသည် ဖြစ်. ,
အွန်လိုင်းကာစီနိုကစားရန်ဘယ်လိုနေသလဲ? Step-by-step ညွှန်ကြားချက်;
ဂျော်ဂျီယာတွင်အွန်လိုင်းလောင်းကစား - သမိုင်းနောက်ခံ
1801 - 1922 ဂျော်ဂျီယာကိုရုရှားအင်ပါယာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး, လောင်းကစားဝိုင်းမှလေးစားမှုနှင့်အတူ၎င်း၏လိုအပ်ချက်အောက်ပါအတိုင်း။ 1918, လွတ်လပ်ရေး၏အကျဉ်းကာလ၌၎င်း, 1922 အတွက်အတူတကွအာမေးနီးယားနှင့်အဇာဘိုင်ဂျန်နှင့်အတူ Transcaucasian ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ 1920 ခုနှစ်တွင် Tiflis အတွက်2ကာစီနိုလောင်းကစားရုံရှိပြီးကတ်များကစားခြင်း၏ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စက်ရုံဖွင့်လှစ်။ ထောင်ဒဏ် 235 နှစ်တက်နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု၏ဖြစ်နိုင်သောသိမ်းယူခြင်း - တရားမဝင်လောင်းကစားလုပ်ငန်းများအဖွဲ့အစည်းဆန့်ကျင်ဆောင်းပါး GSPC ၏ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံး၏3။
1959 Tbilisi နှင့်အတူအလောင်းအစားအပွေးပွိုငျလမျးပေးထားပါတယ်။ အတော်များများတရားမဝင်လောင်းကစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း။
1990 လောင်းကစားလုပ်ငန်းကိုတရားဥပဒေဆိုင်ရာအဆင့်အတန်းကိုလက်ခံရရှိပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးအလောင်းကစားရုံ Tbilisi အတွက်« Ori Juja »။
1991 ဂျော်ဂျီယာလွတ်လပ်ရေးရရှိသွားတဲ့။ လောင်းကစားဝိုင်းဆီသို့ဦးတည် Sosbstvennoe သဘောထားကို။
1992 နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Zviad Gamsakhurdia ပထမဦးဆုံးစည်းမျဉ်းထုတ်ပေး "ဂျော်ဂျီယာသမ္မတနိုင်ငံအတွက်ထီ၏စည်းမျဉ်းများတိုးတက်မှုနှင့်အခြားလောင်းကစားတွင်။ " လောင်းကစားရုံလိုင်စင်များ၏ထုတ်ပေးရေး။
2000 နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Eduard Shevardnadze လောင်းကစားဝိုင်းတားမြစ်ဖို့ဥပဒေကြမ်းမိတ်ဆက်ပေးသည်။ အဆိုပါစီမံကိန်းအားပယ်ချခံခဲ့ရသည်။ ဂျော်ဂျီယာ၌ဤအချက်မှာ 20 ကာစီနိုလောင်းကစားရုံထက်ပိုမိုလည်ပတ်သူတို့ကို 18 Tbilisi ၌ရှိကြ၏။
2002 "စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်လိုင်စင်နှင့်ပါမစ်များထုတ်ပေး၏အခြေခံတွင်။ " ဥပဒေ 1426-Sun ကလိုင်စင်နှင့်ပါမစ်များထုတ်ပေးဘို့နယူးအခြေအနေများ။
2003 Eduard Shevardnadze, တစ်ဖန်လောင်းကစားလုပ်ငန်းကိုပိတ်ပင်ဖို့ကြိုးစားနေပေမယ့် 2004 သမ္မတ Mikheil Saakashvili အားဖြင့်အောင်မြင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါထီအပေါ်ပြည်နယ်လက်ဝါးကြီးအုပ်။
2005 ဥပဒေ "ထီ, လောင်းကစားနှင့်အခြားအမြတ်အစွန်းဂိမ်းအဖွဲ့အစည်းတွင်။ " 1180 №ဒါဟာလည်ပတ်ယနေ့တိုင်အောင်, မြောက်မြားစွာပြင်ဆင်ချက်အတူ။
2014 တိုင်းပြည် 94 လောင်းကစားလုပ်ငန်းများရှိပါတယ်။ Tbilisi, Batumi နှင့် Kutaisi အတွက်အများစုမှာပွင့်လင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံများနှင့်လောင်းကစားဆိုင်များသူ့ကိုလိုက်နာပါ။ ဒါရိုက်တာအကြားဂျြောဂြီယနျနိုင်ငံသားများအပြင်ရုရှား, တူရကီ, အာမေးနီးယားနှင့်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၏နိုင်ငံသားများဖြစ်ကြသည်။
2000 - 2017 အွန်လိုင်းလောင်းကစား။ အွန်လိုင်းဂိမ်းနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ web sites များဖွင့်လှစ်အရာရှိတဦးကလိုင်စင်ရှိသည်သောနီးပါးအားလုံးမြေယာ-based ကာစီနိုလောင်းကစားရုံ, ။ နိုင်ငံတကာအော်ပရေတာဂိမ်းများကိုလွတ်လပ်စွာရရှိနိုင်ကြသည်။
(Eugene Kovtun "ဟုအဆိုပါဆိုဗီယက်၏တိုင်းပြည်အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားမှု" ဟုအဆိုပါစာအုပ်တွေထဲကနေယူပြန်ကြားရေး)
အများစုမှာဖွယ်ရှိ, ဂျော်ဂျီယာအတွက်ရေရှည်အတွက်နိုင်ငံခြားအော်ပရေတာအွန်လိုင်းလောင်းကစားအပေါ်တစ်ဦးဥပဒေကြမ်းတီထွင်ပါလိမ့်မည်။ သူတို့ကနိုင်ငံတော်ကလောင်းကစားဝိုင်းကျော်ထိန်းချုပ်မှုကိစ္စ၌ သာ. ဆင်းရဲ link ကိုဖြစ်ကြသည်။ မြေယာနှင့်အွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံကိုပိုပြီးဂရုတစိုက်အများစု၏အရွယ်အဘို့မိမိတို့ကစားသမားစစျဆေးဖို့တာဝနျရှိအဖြစ် zavisimostyu- Gambler ကစားတိုက်ဖျက်ဖို့စနစ်တစ်ခုဖွံ့ဖြိုးဆဲလိမ့်မည်။
ဂျြောဂြီယနျမြေယာ-based လောင်းကစားရုံရှိသလော အွန်လိုင်း format နဲ့ကိုလည်းရှာဖွေပါ။ ဂျော်ဂျီယာ၏ပိုင်နက်အပေါ်တစ်ဦးတရားဝင်လိုင်စင်နှင့်အတူလုံလောက်သောကုန်း analogue မပါဘဲအွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံများအဖွဲ့အစည်းကတားမြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ဂျော်ဂျီယာအတွက်ဂျြောဂြီယနျအော်ပရေတာအတွက်ကစားလျှင်နာမည်တူမရှိလောင်းကစားရုံရှိပြီးဖြစ်ပါသည် - ကဥပဒေရေးရာမျှမက,
သငျသညျ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လိုင်စင်ရှိပြီးဖြစ်သောမည်သည့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံအတွက်ကစားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာဥပဒေများကိုဆန့်ကျင်ဘူး။ ကဖြစ်ပျက်အဖြစ်နိုင်ငံတကာအော်ပရေတာရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းအတွက်ဥပမာ,, ပိတ်ဆို့ကြသည်မဟုတ်။
နိဂုံး: အဆိုပါအွန်လိုင်းကစားသမားဂျော်ဂျီယာအွန်လိုင်းပုံစံနှင့်နိုင်ငံတကာအော်ပရေတာအတွက်ကိုယ်စားပြုမြေယာ-based ကာစီနိုလောင်းကစားရုံများအကြားရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
အွန်လိုင်းမှလောင်းကစားရုံကိုရွေးချယ်ပါ ။ နိုင်ငံတကာအော်ပရေတာရွေးချယ်တဲ့အခါကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? ယုံကြည်စိတ်ချကာစီနိုလောင်းကစားရုံကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်း၏အားသာချက်ကိုယူပါ။ ဒါဟာညာဘက်ကော်လံတွင်တည်ရှိသည်။
သင်ယူခြင်းအခြေအနေများ ။ အဆိုပါလောင်းကစားရုံ (အွန်လိုင်းစကားပြောခန်း, လိပ်စာ, တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ) မှတစ်ဦးတုံ့ပြန်ချက်လည်းမရှိရှိမရှိအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံ (သိုက်နှင့်ဆုတ်ခွာ options တွေကိုအပိုဆုကြေးငွေများနှင့်အာမခံ၏လိုင်စင်ကိုအခွအေန၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာရှိသမျှသတင်းအချက်အလက်များဆန်းစစ်ပါ။
ကစားသမားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Read ကွန်ယက်၌ဤအွန်လိုင်းသယံဇာတတွေအကြောင်း။ အားလုံးပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များကိုမှန်ကန်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်မဟုတ်ဘဲသတိရပါ။
ပိုက်ဆံဆွေးနွေးပွဲ ။ အဆိုပါလောင်းကစားရုံရန်ပုံငွေများထည့်သွင်းသို့မဟုတ်ဆုတ်ခွာဘို့ option များကိုလည်းကမ်းလှမ်းထားဘာတွေလဲ? စသည်တို့ကိုဗီဇာ, Yandex မှတဆင့် (WebMoney အားဖြင့်အကြွေးဝယ်ကတ်များနှင့်ဒက်ဘစ်ကဒ်ကဘာလဲရန်ပုံငွေဆုတ်ခွာ၏စည်းကမ်းချက်များရှိပါသလဲသင်တို့အဘို့အညာဘက်ဘာလဲ
ဂိမ်း၏အကွာအဝေး ။ ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ဂိမ်း၏အဘယျအမြိုးမြိုး, ဒီလောင်းကစားရုံ? သငျသညျကိုက်ညီနှင့်သင်ကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မည်ဟုတစ်စုံတစ်ခုရှိပါသလား?
အခမဲ့ဂိမ်း ။ ပထမဦးဆုံးစမ်းသပ် mode မှာကစားရန်အခါအခွင့်အလမ်း, လုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ ကိုယ့်ကို "ထုပ် on" ။ ဒါကြောင့်သင်ကကစားလျှင်ပိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ကြောင့်နှင့်တူကိုက်ညီခြင်းရှိမရှိပါလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်ထိုကဲ့သို့သော Baccarat သို့မဟုတ်သင့်ပင်လယ်ဓားပြအဖြစ်အချို့သောဂိမ်းအတွက်ကြိုတင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုဖတ်ရှုဖို့ပိုမဟုတ်ပါဘူး။ ငါတို့သည်သင်တို့တတ်နိုင်သမျှကွဲပြားမှုနှင့်သင်ပိုကောင်းထိန်းချုပ်မှုကိုကူညီနှင့်သင့် bankroll ဖြုန်းနိုင်သောမဟာဗျူဟာဂိမ်းအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
ဂျော်ဂျီယာအဆိုပါအနီးအရှေ့တည်ရှိပါသည်ကပင်လယ်နက်ဖို့ထွက်ပေါက်ရှိတယ်။ အနီးဆုံးအိမ်နီးချင်းများပြည်နယ်များရုရှား, အာမေးနီးယား, တူရကီ, အဇာဘိုင်ဂျန်ဖြစ်ကြသည်။
လက်ရှိနယ်မြေထူထပ်ပင်ဤနေရာတွင်လူနေထူထပ်ခဲ့ II ကိုထောင်စုနှစ်ဂျော်ဂျီယာ၏ဘီစီရွှေခေတ် XII-XIII ကရာစုနှစ်များတွင်ဘုရင်မကြီးဖွစျတဲ့တာ၏နန်းစံရာကိုယူ။ အစိုးရကထပ်တလဲလဲလက်ရှိအချိန်အထိဖဲ့သည်အထိကစစ်ပွဲ, စစ်တပ်နှင့်နိုင်ငံရေးမဟာမိတ်များဝင်သော။ 1918 အတွက်ဝယ်ယူသူတို့ရဲ့ပစ္စုပ္ပန်ခကျြအော။ ဆိုဗီယက်အတွက်နှစ်ပေါင်းရှိပါတယ်နောက်သို့လိုက်ကြ၏။
1991 ခုနှစ်တွင်ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုပြိုကွဲပြီးနောက်ဂျော်ဂျီယာနောက်တဖန်လွတ်လပ်သောဖြစ်လာခဲ့သည်နှင့် 1992 အတွက်ကုလသမဂ္ဂဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ယနေ့တိုင်းပြည်တစ်ဝှမ်း 4.5 လူဦးရေသန်းမှမူလနေရာဖြစ်သည်။ Irakli Garibashvili - သူသမ္မတ Giorgi Margvelashvili နှင့်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
Tbilisi ၏သန့်ရှင်းသောဘုရားသုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူဘုရားရှိခိုးကျောင်း ။ ဤသည် Tbilisi အတွက်သန့်ရှင်းသောဘုရားသုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူဘုရားရှိခိုးကျောင်း၏နာမတော်သည်။ တည်နေရာ: ဂျော်ဂျီယာ, Tbilisi, Elias ဟေးလ်။ Archil Mindiashvili ကဒီဇိုင်း Young ကသြသဒေါက်ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း, - Tbilisi ရဲ့အလှဆုံးအဆောက်အဦးများထဲကတစ်ခု။
Nerikala ။ နေရပ်လိပ်စာ: Tbilisi အတွက်တောင်ကို Mtatsminda ။ ရဲတိုက်ရှုပ်ထွေးသော၏အသက်အကြီးဆုံးအပိုင်းအစများဟာ IV ရာစုမှပိုင်တော်မူ၏။
လိပ်ကန် ။ တည်နေရာ: တောင်ပေါ်က Mtatsminda, Tbilisi ထံမှ3ကီလိုမီတာမြောက်ပိုင်းဆင်ခြေလျှော။ cable ကိုကားတစ်စီးဖြစ်သောတစ်ဦးကပေါ်ပြူလာအားလပ်ရက် destination သည်။
Anchiskhati ။ နေရပ်လိပ်စာ: st ။ Shavteli, 9, Tbilisi ။ ပြန် VI ကိုရာစုမှချိန်းတွေ့တိုင်းပြည်အတွင်းရှေးအကျဆုံးဂျြောဂြီယနျ Orthodox ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း။ ဒဏ္ဍာရီအဆိုအရကြောင့်ပင် Iberia Villas Udzharmeli များ၏ရှင်ဘုရင်နှင့်အတူတညျဆောကျခဲ့သညျ။
Keshvati ။ Adress: Shota Rustaveli, Tbilisi .. စိန့်ဂျော့ဂ်ျ၏ Orthodox ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းအစောပိုင်းနှစ်ဆယ်ရာစု။
ဂျော်ဂျီယာ - အာရဗီဘာသာစကားကနေလာသောတိုင်းပြည်အမည်, ။ self-သတ်မှတ်ရေး Sakartvelo ဖြစ်ပါတယ်။
Iberia - က III ကိုရာစုဘီစီဂျော်ဂျီယာ၏ပိုင်နက်၏နာမတော်ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ အီး။ ယနေ့တွင်စပိန်၏အမည်ဖြစ်ပြီး, ဤမျှမတော်တဆမှုပါပဲ။ အဆိုပါစပိန်၏ဘိုးဘေးတို့ဂျော်ဂျီယာကနေခဲ့ရောက်လာတယ်။ ဥရောပမှ unique, အဘစျက်ဘာသာစကား Georgian ဆင်တူသည်။
ရုရှားဘာသာစကားတိုင်းပြည်အတွက်အလွန်လူကြိုက်များမဟုတ်ပါဘူး, ကအများအားဖြင့်သက်ကြီးရွယ်အိုနားလည်သဘောပေါက်ထားပါသည်။ အင်္ဂလိပ်အပေါ် Non-ရုရှားလူငယ်ပိုကောင်းလက်ကိုင်သည်။
လူတွေအသက်အရွယ် 1 သန်း၏အကြွင်းအကျန်တွင်။ 770 အနှစ်တထောင်ပတ်လုံး, ဂျော်ဂျီယာအဖြစ်ကောင်းစွာရသော 34 တထောင်ရှေးဟောင်းချည်သကဲ့သို့, တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်း။
ဂျော်ဂျီယာမှာရှိတဲ့လောင်းကစားဝိုင်း၏စည်းမျဉ်းဥပဒေဝန်ဆောင်မှုင်ငွေအတွက်ပါဝင်နေသည် - ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်တွင်အထူးကိုယျခန်ဓာ။ ၎င်း၏ရည်မှန်းချက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှအထောက်အကူတစ်ခုပတ်ဝန်းကျင်အဖြစ်လောင်းကစားအပေါ်ရိုးရှင်းပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းအခွန်များဖွဲ့စည်းရေးဖန်တီးရန်ဖြစ်ပါသည်။
ဂျော်ဂျီယာမှာရှိတဲ့လောင်းကစားဝိုင်းစည်းရုံးရေး, ထိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အလုပ်များထဲမှတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောဒေသများတွင်တစ်ဦးလောင်းကစားရုံ, slot ကစက်တွေ, စားပွဲပေါ်မှာဂိမ်း, အားကစားလောင်းကစား, ဘင်ဂိုကစား, lotto နှင့်ထီပါဝင်သည်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ပါမစ်ထုတ်ပေးခြင်း, လောင်းကစားများ၏စီစဉ်၏အဖြစ်စည်းမျဉ်းနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအခွန်ဝန်ကြီးဌာနဝန်ဆောင်မှု (ယူနိုက်တက်အခွန်, အကောက်ခွန်အုပ်ချုပ်ရေး) သယ်ဆောင်။
ပညတ်တရားအားဖြင့်, ဂျော်ဂျီယာအတွက်လောင်းကစားဝိုင်းဖွင့်လှစ်ဖို့အားလုံးကိုခွင့်ပါမစ်အီလက်ထရောနစ် form မှာရရှိသောနိုင်ပြီးအခွန်စီမံခန့်ခွဲတက်ရောက်ရန်မလိုအပ်လည်းမရှိ။ စာရွက်စာတမ်းဘင်ဂိုကစားသို့မဟုတ်ဘင်ဂိုကစားနှင့်အတူရုံးခန်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအလောင်းအစားတစ်ခုလောင်းကစားရုံ slot ကစက်ခန်းမများအတွက်ငါးနှစ်သက်တမ်းရှိဖြစ်ပြီး, ထီ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်တစ်နှစ်။ တစ်ဦးလောင်းကစားရုံသို့မဟုတ် slot နှစ်ခုအဘို့အခွင့်ပြုချက်ကိုလက်ခံရရှိကြောင်းကုမ္ပဏီများ, desktop ပေါ်ကဂိမ်းကစားဘို့အသီးခြားစီစာရွက်စာတမ်းတောင်းဆိုနိုင်သည်။ ကာလအတွက်အဓိက resolution ကိုသို့မရောက်မှီတိုင်အောင်ဒါဟာတရားဝင်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ပညတ္တိကျမ်းလောင်းကစားဝိုင်းအမျိုးမျိုးများအတွက်နှစ်ပတ်လည်နှင့်သုံးလတစ်ကြိမ်စွဲချက်ပေးပါသည်။ ခွင့်ပြုမိန့်များအတွက်နှစ်စဉ်ကြေး - ကပုံမှန်တန်းတူအရစ်ကျပေးချေသော fixed ငွေပမာဏသည်။ သုံးလတစ်ကြိမ်လောင်းကစားဝိုင်းအတွက်အသုံးပြုတစ်ခုချင်းစီအရာဝတ္ထုများအတွက်လေးကြိမ်တစ်နှစ်ပညတ်တော်မူ၏။ သူတို့ရဲ့ငွေပမာဏလောင်းကစားဝိုင်း၏လယ်ပြင်နှင့်အဖွဲ့အစည်းတည်ရှိရာထားတဲ့အတွက်ဒေသပေါ် မူတည်. ကွဲပြားခြားနားသည်။
အခွန်အလွန်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဤအရာအများစုကိုအဖွဲ့အစည်း၏တည်နေရာအားဖြင့်ထိခိုက်နေကြသည်ဥပမာ, တခြားနေရာတွေမှာထက်အများကြီးပို Tbilisi အတွက်အခွန်များ, ဒါပေမယ့်လောင်းကစားအတွက်စိတ်ဝင်စားမှုပိုမိုမြင့်မားဖြစ်ကြသည်။ ဤနေရာတွင်ဂျော်ဂျီယာမှာရှိတဲ့လောင်းကစားရုံဖွင့်လှစ်ရန်ခွင့်ပြုချက်အဘို့အ gel5သန်း slot နှစ်ခုအပေါ်တစ်နှစ်ပေးဆောင်ရပါလိမ့်မယ် - ။ gel 1 သန်း slot ကစက်တွေသည်ဒေသတွင်း၌မဆိုနှစ်စဉ်အခွန်မရှိဘဲကလပ်ဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းသုံးခုဖွင့်ဖို့ဒေသခံလောင်းကစားရုံပိုင်ရှင် - တူညီကလပ်။
တချို့ကဂျော်ဂျီယာကာစီနိုလောင်းကစားရုံနှစ်စဉ်ငွေပေးချေခြင်းမှအပြည့်အဝကင်းလွတ်ခွင့်ရသည်။ Batumi ခုနှစ်, Kobuletti, Khelvachauri, Anaklia နှင့် Ganmukhuri အနီး 80 ဟိုတယ်အခန်းပေါင်းမှ 100 ထံမှတည်ဆောက်ခြင်း, အခွန်ပေးဆောင်လို့မရပါဘူး။ လုံးဝကနေလွတ်မြောက်လာ Gudauri ဒေသမှာတော့ Kazbegi, Bakuriani, Tskaltubo နှင့် Sighnaghi လောင်းကစားရုံ။ ပုံထဲမှာအပြာရောင်အရောင် 100 + များအတွက်အကျိုးကျေးဇူးများကိုခံယူသောသူတို့အဖွဲ့အစည်းများညွှန်ပြအနီရောင်ခန်း, built - အားလုံးအခြေအနေများအတွက် - 80 + ခန်း, အစိမ်း။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဝင်ငွေ (လုပ်ခ) အပေါ်အခွန် - 20%;
အိမ်ခြံမြေအခွန် - 1% အထိ;
ကော်ပိုရိတ်ဝင်ငွေခွန် - 15%;
20% - ပြိုင်ပွဲကာလအတွင်းကျင်းပသည့်တာဝန်များအတွက်အခွန်။
စာရင်းကိုင်နှုန်းထားများအဘို့ငွေသားမှတ်ပုံတင်ကို install ဖို့တာဝန်ကနေဖြန့်ချိကလပ် desktop ပေါ်ကဂိမ်းကစားခြင်း, slot ကစက်ခန်းမနှင့် Sports များထက်။ သငျသညျထိုကဲ့သို့သောအချိုရည်သို့မဟုတ်အစားအစာရောင်းချအဖြစ်အပိုဆောင်းဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပေးမှသာလြှငျသူတို့ကသူတို့ကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
ဂျော်ဂျီယာအတွက်ဂိမ်းကစားခြင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အချိန်ခွင့်ပြု - 20 ရက်။ သငျသညျအခမဲ့ရနိုင်သည်။ စာရွက်စာတမ်းအရေးတကြီးလိုအပ်ပါသည်ဆိုပါက gel 400 ($ 160) ဆပ်ဖို့ဖြစ်နိုင် - 10 နေ့အဘို့ - 800 ရက်ပေါင်းသို့မဟုတ် gel 320 တထောင် ($5။ ) - ထိုသို့ gel2(800 $) 1 ရက်အတွင်းအဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ထိုကဲ့သို့သောစီမံကိန်းများအတွက်လုပ်ပေးမှသာလိုင်စင်နှင့်အတူစစ်မှန်သောအဖွဲ့အစည်းများ၏ပိုင်ရှင်များနိုင်ပါတယ်အဖြစ်အွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံများ၏အဖွဲ့အစည်းအတွက်သီးခြားခွင့်ပါမစ်, ထုတ်ပေးကြသည်မဟုတ်။ သူတို့ကလောင်းကစားရုံ, slot နှစ်ခု, အားကစားလောင်းကစားများနှင့်ထီပုံဆွဲနှင့်အတူဆိုက်စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ သူတို့ခြိမ်းခြောက်ပါဘူးနိုင်ငံခြားရေးပြိုင်ဖက် - ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများသည်ပညတ်တရားအားဖြင့်ဒါအလားအလာစျေးကွက်ဒေသခံလုပ်ငန်းရှင်များအဘို့လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်, ဂျော်ဂျီယာမှာရှိတဲ့လောင်းကစားခြင်းမှပိတ်ပင်တားမြစ်သည်။
ထိုကဲ့သို့သောက်ဘ်ဆိုက်များ၏စစ်ဆင်ရေး၏ရလဒ်များကိုအဆိုအရသုံးလတစ်ကြိမ်အခကြေးငွေပေးဆောင်။ သူတို့ရဲ့အရွယ်အစားဒေသခံအုပ်ချုပ်ရေးကဆုံးဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ gel တထောင် 30-60 အကြားမှာရှိတဲ့ကွဲပြားခြားနားသည်။ ($ 12-24 တထောင်။ ) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, နီးပါးရှိပါသည်နောက်ထပ်အခွန်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော။
3 Tshaltubo အတွက် (မကြာသေးမီကဟိုတယ်အခန်းတစ်ခန်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ကြရသောသူတို့အလေးအဖွဲ့အစည်းများ) - - 11 နှင့် Kazbegi -5Tbilisi ၌ဤအချက်မှာ 1 ခွင့်ပြုချက် Batumi ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် slot ကစက်အခန်းထဲမှာ 72 တရားဝင်ဂျော်ဂျီယာ 1073ဘင်ဂိုကစားသို့မဟုတ် lotto, 41 နှင့်3ထီလောင်းကစားကလပ်နှင့်အတူစျေးဆိုင်, ကုမ္ပဏီများလောင်းကစားဂိမ်းဥပဒေများအပေါ် operate ။
ဂျော်ဂျီယာဝင်ငွေ၏အကြီးတန်းဝန်ဆောင်မှု - လောင်းကစားကျေးဇူးတင်စကား Theon Shiukashvili ၏အယ်ဒီတာ့အာဘော်သတင်းပေးအချက်အလက်တွေအားလုံးကိုသည်။ သူမသည်တစ်စပီကာအဖြစ်ကစားဂျော်ဂျီယာ Congress မှာဖျော်ဖြေထားပြီးသူအမျိုးသားရေးအခွန်အာဏာပိုင်များအတွက်အတွေ့အကြုံဆယ်စုနှစ်တစ်ခုရှိပြီးဂျော်ဂျီယာမှာရှိတဲ့လောင်းကစားဝိုင်းများ၏အဖွဲ့အစည်းအတွက်ပါမစ်ထုတ်ပေးတာဝန်ရှိသည်။
လွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့ပွီးလြှငျ, ဂျော်ဂျီယာအဆိုပါဂိမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းအဆင့်မြှင့်ဖို့သူ့ဟာသူကျူးလွန်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအဆင်သင့်ပထဝီအနေအထား, ဥပဒေပြု၏မရှိခြင်းလောင်းကစားဝိုင်းအပေါ်ပိတ်ပင်ထားမှုအဖြစ်ကနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေအများစုကိုအားဖြင့်ဂိမ်းကစားစက်မှုလုပ်ငန်းမှသစ္စာရှိမှု, အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများနိမ့်အဆင့်ကို, စီးပွားရေးလုပ်နေတာ၏လွယ်ကူခြင်း, အခွန်အကောက်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအဆင်ပြေအခြေအနေများဂျော်ဂျီယာ၏နံပါတ်လောင်းကစားများကို အားသာချက်များ။
လက်ရှိဂျြောဂြီယနျဥပဒေပြဌာန်းတရားဝင်လောင်းကစားလှုပ်ရှားမှုများအမျိုးအစားအားလုံးကိုတည်ရှိနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါလောင်းကစားရုံ, (လောင်းကစားအပါအဝင်) Bookmakers စီးပွားရေး, ထီ, slot ကစက်တွေခန်းမလောင်းကစားဝိုင်းကလပ်အသင်း - ပင်မမျိုးစိတ်တွေထဲမှာ။ အွန်လိုင်းအစိတ်အပိုင်းအတွက်, ပညတ္တိကျမ်းလောင်းကစားရုံ, လောင်းကစားများနှင့်အထိုင်စက်နန်းတော်အဖွဲ့အစည်းခွင့်ပြုပါတယ်။
ဂျော်ဂျီယာမှာရှိတဲ့လောင်းကစားဝိုင်း၏အဖှဲ့အစညျး၏အင်္ဂါရပ်များ device ကို system ကို-အီလက်ထရောနစ်ဂိမ်းများကို (မြေပြင်) လောင်းကစားဝိုင်းတည်ထောင်ခြင်း၏အမှန်တကယ်ရှိနေခြင်းရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။
25.03.2005 №1180ကနေ "ထီ, လောင်းကစားနှင့်အမြတ်အစွန်းဂိမ်းအဖွဲ့အစည်းတွင်" ဂျော်ဂျီယာဥပဒ;
24.06.2005 №1775ရက်စွဲပါ "လိုင်စင်များနှင့်ခွင့်လက်မှတ် on" ဂျော်ဂျီယာ၏ဥပဒေ,
12.08.2003 №2937ကနေ "လိုင်စင်နှင့်လိုင်စင်အခကြေးငွေတွင်" ဂျော်ဂျီယာဥပဒေ,
29.12.2006 №4250ကနေ "လောင်းကစားဝိုင်းများစုဆောင်းခြင်းတွင်" ဂျော်ဂျီယာ၏ဥပဒေ,
17.09.2010 №3591ထံမှဂျော်ဂျီယာ၏အခွန် Code ကို;
ဂျော်ဂျီယာ၏တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး၏အမိန့်နှင့်ပြည်တွင်းရေးရာဝန်ကြီး 14.12.2011 №611-1013 ကနေ "စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစမ်းသပ်၏ပိုင်ရှင်များအတွက်စည်းမျဉ်းများခွင့်ပြုချက်တွင်လောင်းကစားဝိုင်းနှင့်အခြားအမြတ်အစွန်းဂိမ်းများကိုခွင့်ပြု";
သတင်းအချက်အလက်ရယူများအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အခွအေနမြေားတှငျ "ဟုအဆိုပါစည်းမျဉ်းဥပဒေများ၏အတည်ပြုချက်တွင်" ဂျော်ဂျီယာ၏ဘဏ္ဍာရေးစောင့်ကြည့် of Service ကိုဦးခေါင်း၏အမိန့်၎င်း၏စနစ်တည်ဆောက်ခြင်း, ဂျြောဂြီယနျဘဏ္ဍာရေးစောင့်ကြည့်ဝန်ဆောင်မှုအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ဂီယာထီ၏စီစဉ်အသုံးပြုပုံလောင်းကစားနှင့်အခြားအမြတ်အစွန်းဂိမ်း "နှင့်" သတင်းအချက်အလက်များရယူ၏အမိန့်နှင့်အခြေအနေများ, ယင်း၏စနစ်တည်ဆောက်ခြင်း, 28.07.2004 №94ထံမှလောင်းကစားရုံ "ကဂျော်ဂျီယာအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ဂီယာ၏ဘဏ္ဍာရေးစောင့်ကြည့်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွင်။
လောင်းကစားဝိုင်း၏အဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့အကငျြ့ဘို့ခွင့်ပြုချက် (လိုင်စင်) ရယူဘို့ဂျော်ဂျီယာမှာတော့အတော်လေးသစ္စာစောင့်သိလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်လိုအပ်ချက်များကို။
ခွင့်ပြုချက်ကုမ္ပဏီများသည်ဂျော်ဂျီယာအတွက်မှတ်ပုံတင်ထားနိုင်ပါတယ် Get, ဤကုမ္ပဏီများသည်၏ပိုင်ရှင်များရောနှောဂျော်ဂျီယာနှင့်နိုင်ငံခြားသားများနှစ်ဦးစလုံးနိုင်ငံသားတွေနိုင်ပါတယ်။
လောင်းကစားဝိုင်းအဘို့အခွင့်ပါမစ်များထုတ်ပေးဂျော်ဂျီယာ၏အခွန်ဝန်ဆောင်မှုသယ်ဆောင်။ အဆိုပါရရှိထားသော IRS ကိုဝဘ်စာမျက်နှာ၏အကူအညီဖြင့်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးပုံစံအတွက်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများတင်ပြရန်ရမည်ဖြစ်သည်။
လက်ခံရရှိသူ resolution ကို 1 လုပ်အားခအဘို့ဥပဒေပြဌာန်းအားသွင်းထားပေါ် မူတည်. စာရွက်စာတမ်း၏သက်တမ်းပေးပို့ရွေးကောက် - gel2တထောင် / $ 830,5ရက်ပေါင်း - gel 800 / $ 330, 10 ရက်ပေါင်း - gel 400 / $ 365, 20 လုပ်သားများ။ ရက်ပေါင်း - တာဝန်ခံ၏အခမဲ့ဖြစ်သည်။
လျှောက်ထားသူလောင်းကစားစုစည်းဖို့ခွင့်ပြုချက်, ထီ, မြှင့်တင်ရေးထီကတော့ဂျော်ဂျီယာအခွန်ဝန်ကြီးဌာနဝန်ဆောင်မှုမှတင်ပြ:
လုပ်လက်မှတ်တွေ၏နံပါတ်ညွှန်ပြ (က system ကို-အီလက်ထရောနစ် form မှာဖွဲ့စည်းဂိမ်းများ, မှလွဲ. ) အကျိုးအမြတ်ဂိမ်းလက်မှတ်တွေထုတ်လုပ်ရန်သောရရှိထားသောနှင့်လူတစ်ဦးသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းအကြားစာချုပ်,
(က system ကို-အီလက်ထရောနစ် form မှာဖွဲ့စည်းဂိမ်းများ, မှလွဲ. ) နမူနာလက်မှတ်အမြတ်အစွန်းဂိမ်း;
လောင်းကစားများ၏အဖှဲ့အစညျး၏အမှု၌ - ဆုရန်ပုံငွေ၏ပြဋ္ဌာန်းချက်အတည်ပြုတဲ့စာရွက်စာတမ်း 10 တထောင် gel / $ 4, 15 တထောင်ထက်မနည်းဖြစ်၏။ ။
အမြတ်အစွန်းဂိမ်းများနှင့်မိမိတို့၏အဖွဲ့အစည်းစာရင်းနှင့်စာရင်းစီမံခန့်ခွဲခြင်းကိုခံရလတံ့သောအနေဖြင့်အမှန်တကယ်လိပ်စာ: သတ်မှတ်ထားသောရပါမည်သည့်စနစ်အား-အီလက်ထရောနစ်ဂိမ်း၏အမိန့်, - စနစ်တကျ-အီလက်ထရောနစ်ပုံစံ (အွန်လိုင်းဂိမ်း) တွင်စုစုပေါင်း၏အဖှဲ့အစညျး၏အမှု၌ ဂိမ်း, တည်နေရာ (s) နှင့်ပေးချေမှုများအတွက်နောက်ဆုံးနေ့၏အသက် 18 နှစ်အောက်ဖြစ်ကြသည်သူတစ်ဦးချင်းစီမှာကစား၏တားမြစ်ချက်အပေါ်သတင်းအချက်အလက်များ။
ဂိမ်းရဲ့စည်းရုံးရေးမှူးမှ (အွန်လိုင်း) ကအင်တာနက်ပေါ်ရှိအခွင့်အလမ်း၏ဂိမ်းများကိုစုစည်းပြီးလုပ်ဆောင်သွားရန်, သင်ကစားပွဲ၏ "မြေပြင်" (အော့ဖ်လိုင်း) အတွက်ခွင့်ပြုချက်ရှိရမည်။ ဂိမ်းအော့ဖ်လိုင်းအဘို့အခွင့်ပြုချက်ကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်, ဒီမစ်၏ပိုင်ရှင်စာရွက်စာတမ်းများ၏အထက်ပါစာရင်း၏ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အတူအွန်လိုင်းဂိမ်းထွက်သယ်ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုချက်အဘို့ဂျော်ဂျီယာ၏ပြည်တွင်းအခွန်ဝန်ဆောင်မှုမှလျှောက်ထားရန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ဂျော်ဂျီယာမှာရှိတဲ့လောင်းကစားဝိုင်း၏အဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့အကငျြ့ဘို့လှုပ်ရှားမှုများတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ Authorized5နှစ်ပေါင်းတရားဝင်သည်။
ဂျော်ဂျီယာမှာရှိတဲ့လောင်းကစားဝိုင်းများ၏အဖွဲ့အစည်းအတွက်ပါမစ်များထုတ်ပေးဘို့ငွေပေးချေမှုရမည့်နှစ်စဉ်ထွက်ယူသွားတတ်၏။ ပထမဦးစွာရရှိထားသောစစ်ဆင်ရေး၏ပထမတစ်နှစ်ချေ, ပြီးတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအခြားပေးချေမှုအောင်နေဖြင့်ခွင့်ပြုချက်သက်တမ်းတိုးမည်။
ထို့ကြောင့်တိုင်းပြည်များ၏အပန်းဖြေမြို့ကြီးများရှိကာစီနိုလောင်းကစားရုံများနှင့်အခြားလောင်းကစားထူထောင်မှု (Borjomi, Batumi, Kobuleti) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်သွားရန်ခွင့်ပြုချက်များအတွက်ဘုတ်အဖွဲ့ထူထောင်အတွက်သိသာထင်ရှားသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားပျော်မွေ့။
.. gel 250 သန်း / $ 103.652 - အထူးသဖြင့်, Batumi တစ်ဦးလောင်းကစားရုံစုစည်းဖို့ခွင့်ပြုချက်များအတွက်လုပ်ခ၏နှစ်ပတ်လည်နှုန်းမှာ 072 တထောင် gel / $ 250 တထောင်, Tbilisi ရှိနေစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ခံသူ 100 ခန်းထက်မနည်း၏ရှေ့မှောက်တွင်နှင့်အတူအသစ်တည်ဆောက်ခဲ့သည်ဟိုတယ်များ၏နယ်မြေပေါ်တွင်အဖွဲ့အစည်းအားမရ Batumi အတွက်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံစုစည်းဖို့ခွင့်ပြုချက်ရှိပြီးလျှင်ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်,, က 10 နှစ်ခွင့်ပြုချက်များအတွက်ငွေပေးချေခြင်းမှကင်းလွတ်ခွင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ခွင့်ပြုချက်လောင်းကစားရုံအဖွဲ့အစည်းက Kazbegi မြူနီစီပယ်နယ်မြေများ, Tskhaltubo, Sighnaghi မှာအခမဲ့ပေးထားသည်။
အခြေအနေကလောင်းကစားဝိုင်း၏အခြားအမျိုးအစားများ (ထီ, အားကစားလောင်းကစား, လောင်းကစားကလပ်) လုပ်ဆောင်သွားရန်ခွင့်ပြုချက်များအတွက်ဘုတ်အဖွဲ့၏အရွယ်အစားတူညီသည်။ ... မြေတပြင်လုံး 200 တထောင် gel / $ 8.3 တထောင် - ဥပမာအားဖြင့်, Tbilisi အတွက်ဘွတ်စုစည်းဖို့ခွင့်ပြုချက်များအတွက်အခကြေးငွေ gel 80 တထောင် / အမေရိကန် $ တစ်နှစ်လျှင် 33.2 တထောင်, Batumi ၏အုပ်ချုပ်ရေးခရိုင်၏ပိုင်နက်ရှိနေစဉ်, Kutaisi, Rustavi ဖြစ်ပါသည် ။ တစ်နှစ်တွင်။
ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်မှုများ၏ဘာသာရပ်တစ်ခုအုပ်ချုပ်ရေးအခကြေးငွေပေးဆောင်လောင်းကစားများ၏ခွင့်ပြုချက်များအတွက်နှစ်စဉ်ကြေးများအပြင်, အရာများ၏ပမာဏကိုအဖွဲ့အစည်းများနှင့်လေးပုံတပုံ၏စကေးအပေါ် မူတည်. ဆုံးဖြတ်:
တစ်ခုချင်းစီကို slot ကစက်နှင့်အတူ - gel 1,5-3 တထောင်။
တစ်ဦးချင်းစီစားပွဲလောင်းကစားရုံနှင့်အတူ - gel 15-30 တထောင်။
တစ်ဦးချင်းစီစားပွဲလောင်းကစားကလပ်နှင့်အတူ - gel 3-10 တထောင်။
စနစ်တစ်ခု-အီလက်ထရောနစ် form မှာဂိမ်းနှုန်း - gel 30-60 တထောင်။
အခွင့်အလမ်းသို့မဟုတ်အမြတ်အစွန်း၏ဂိမ်းများကိုများအတွက် Resolution, အဆိုအရဖွဲ့စည်းအရာဝတ္ထုပြင်ပတွင်တည်ရှိသောသောစနစ်-အီလက်ထရောနစ်ပုံစံအတွက်လောင်းကစားရုံဂိမ်းအဘို့အသီးအသီးငွေသားမှတ်ပုံတင်သို့မဟုတ်အမြတ်အစွန်းနှင့်အတူ - gel 1-1,5 တထောင်။
အဆိုပါဆုချီးမြှင့်ရေကူးကန်၏ 10% - တစ်ဦးချင်းစီမြှင့်တင်ရေးဆွဲအတူ။
စနစ်တကျမဖြစ်သည့်မစ်၏ကိုင်ဆောင်သူတွင်သဘောတူထားသောအသုံးအနှုန်းများလုပ်ဆောင်ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကသတ်မှတ်အချိန်ကန့်သတ်အတွင်း, ထိုကြောင့်ခွင့်ပြုမိန့်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီက၎င်း၏လှုပ်ရှားမှုများချောမွေ့ဖို့ဒဏ်ငွေနှင့်မူလတန်းလိုအပ်ချက်သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ ဒဏ်ငွေ gel တထောထံမှကွဲပြားခြားနားသည်။ 10 တထောင်။ / $ 415-4150 ။
လိုအပ်ချက်များကိုခွင့်ပြုလိုင်းသို့ရောက်စေဖို့သတ်မှတ်ရက်သတ်မှတ်ထားခဲ့ပြီးသောခွင့်ပြုချက်၏ကိုင်ဆောင်သူဒီလိုအပ်ချက်မပြည့်စုံကြသည်မဟုတ်ပါကသုံးကြိမ်၏ပမာဏအတွက်ဒုတိယပင်နယ်တီသတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ ခွင့်ပြုမိန့်ကိုင်ဆောင်သူမစ်၏အခွအေနမပြည့်စုံသေးပါဘူးဟာနောက်ဆုံးနေ့၏အဆုံးအပြီးလျှင်, ဒဏ်ငွေတစ်နေ့တာ၏ဒုတိယစည်းကြပ်နှင့်တကွ, ဒဏ်ငွေပမာဏသုံးဆဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါခွင့်ပြုချက်၏ကိုင်ဆောင်ထားသူ, အခွင့်ပြုချက်၏ဖျက်သိမ်းခြင်းအပေါ်ဆုံးဖြတ်ချက်လိုင်စင်အခြေအနေများပြဋ္ဌာန်းရန်မည်မဟုတ်ပါ။
လောင်းကစားများ၏ဘာသာရပ်များတစ် resolution ကိုမျှော်လင့်သောလှုပ်ရှားမှုများဆက်လက်လာမည့်နှစ်တွင်ချင်မပါဘူးဆိုရင်, ကခွင့်ပြုချက်ဖျက်သိမ်းသောပြည်တွင်းအခွန်ဝန်ဆောင်မှု, အကြောင်းကြားရန်နှစ်စဉ်ငွေပေးချေမှု၏အဆုံးရှေ့တော်၌ထို5စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနေ့ရက်ကာလအဘို့လောက်ပေ၏။
လောင်းကစားဝိုင်းလိုအပ်ချက်များကို၏ပိုင်ရှင်များ၏ခွင့်ပြုချက်၏ကွပ်မျက်စောင့်ကြည့်သောအဓိကအစိုးရအလောင်းတွေလိုင်စင်အခြေအနေများသတ်မှတ်သော, ဂျော်ဂျီယာ၏ပြည်တွင်းအခွန်ဝန်ဆောင်မှု, ပြည်တွင်းရေးရာဂျြောဂြီယနျဝန်ကြီးဌာနနှင့်ဂျော်ဂျီယာ၏ဘဏ္ဍာရေးစောင့်ကြည့်ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ကြသည်။
၎င်း၏အရည်အချင်းကိုအတွင်းမှာပဲအုပ်ချုပ်ရေးအလောင်းတွေလောင်းကစားဝိုင်းလှုပ်ရှားမှုများများ၏ဘာသာရပ်များချိုးဖောက်မှုများမှစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများ၏နည်းလမ်းများစောင့်လျှောက်ထားရမည်။ ဘုံအခွန်လျော်ခြင်းနှင့်အချိန်မီငွေပေးချေမှုနှင့် ပတ်သက်. အခွန်ဝန်ဆောင်မှုစစ်ဆေးနေနေကြသည်။ အဆိုပါပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနစောင့်ကြည့်ဘို့အသီးအသီးအဖွဲ့အစည်းအတွက် devices များရရှိမှုနှင့် ပတ်သက်. ပညတ်တရား၏လိုအပ်ချက်များကိုပွညျ့စုံကိုထိန်းချုပ်ထား။ ဒါ့အပြင် (သူတို့ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်လျှင်) အချိန်မီငွေပေးချေမှုပြစ်ဒဏ်များနှင့် ပတ်သက်. အော်ပရေတာလိုအပ်ချက်များကိုနှင့်အတူလိုက်နာမှုစောင့်ကြည့်။ အရေးပါသောအရာဝတ္ထုတင်းကြပ်စွာပညတ်တရားအားဖြင့်တားမြစ်ထားသောသောအတိုးနှုန်း, များအတွက်အကြွေးလောင်းကစားရုံငွေသားဂိမ်းကစားသမားတစ်ဦးကိုစမ်းသပ်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောချိုးဖောက်မှုများထူထောင်ခဲ့ကြပါလျှင်, လောင်းကစားများ၏အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပြုချက်၏ကိုင်ဆောင်သူကြီးမားတဲ့ဒဏ်ငွေပေးဆောင်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီချိုးဖောက်မှုထပ်မဖြစ်အောင်၏ဖြစ်ရပ်အတွက်လောင်းကစားဝိုင်းတည်ထောင်ခြင်း၏ရာဇဝတ်မှုတာဝန်ယူမှုကိုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတူတတ်နိုင်သမျှရုပ်သိမ်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဂျော်ဂျီယာ - နိမ့်အခွန်ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ပွင့်လင်းအခွန်မူဝါဒနှင့်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်။
ဂျော်ဂျီယာအတွက်ဘွတ်လှုပ်ရှားမှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဤအမျိုးအစားလုပ်ဆောင်သွားရန်ခွင့်ပြုချက်ကိုရသောသူအသီးအသီးအော်ပရေတာ, 5% VAT ကိုမှုနှုန်းကစားနည်းချေကြောင်းထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်အခွန်ကောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်အခွန်နှောင့်ရှက်ပါမစ်များကိုင်ဆောင်ထားသူများအတွက်အရေးပါမဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော်လောင်းကစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုယ်စားလှယ်များတစ်ဦးထက်ပိုသောအကောင်းဆုံးစုစုပေါင်းလောင်းကစားဝိုင်းအမြတ်အစွန်းများ 15-20% ၏အခွန်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့စဉ်းစားရန်နာမယူဘဲနေကြသည်။
အငြင်းပွားဖွယ်လောင်းကစားဝိုင်း၏လယ်ပြင်တွင်အခြားလှုပ်ရှားမှုများ (ကာစီနိုလောင်းကစားရုံ, ထီ, ဒါကြောင့်ပေါ်မှာ။ N. ) အခွန်နှင့်အတူအခြေအနေကဖြစ်ပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများသည်၎င်း၏လှုပ်ရှားမှုများ၏အသားတင်ဝင်ငွေ 15% တစ်မှုနှုန်းမှာအခွန်ပေးဆောင်။ ထို့ကြောင့်သူတို့ကဂျော်ဂျီယာ၏ပိုင်နက်အပေါ်ကိုအခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများကဲ့သို့တူညီသောအခြေအနေများအတွက်ဖြစ်ကြောင်း - သူတို့သည်လောင်းကစားဝိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းန်ဆောင်မှုအတွက်ပြဌာန်းချက်ကိုမှဆက်စပ်မဟုတ်လှုပ်ရှားမှုများဖြစ်ကြသည်။
"ထီ, လောင်းကစားနှင့်အမြတ်အစွန်းဂိမ်းအဖွဲ့အစည်းတွင်" ပုဒ်မဂျော်ဂျီယာ၏ဥပဒေ 35 လောင်းကစားဝိုင်းလုပ်ဆောင်သွားရန်ပိုင်ရှင်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်အဘို့ကန့်သတ်နေတဲ့အရေအတွက်ကတည်စေ။ ဥပမာ, ၏အိမ်များလောင်းကစားဝိုင်းနှင့် (ပရိုမိုးရှင်းထီ မှလွဲ. ) အမြတ်အစွန်းဂိမ်းထီအဖွဲ့အစည်းအဖြစ်သားသမီးရဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများအတွက် (ပရိုမိုးရှင်းထီလက်မှတ်တွေ မှလွဲ. ) ထီလက်မှတ်တွေ, လောင်းကစားနှင့်အမြတ်အစွန်းဂိမ်းရောင်း / ဖြန့်ဖြူးခွင့်ပြုမထား ပြည်နယ်နှင့်ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များ၏ကိုးကှယျမှု, ကလေးဆေးရုံမှာ, စာကြည့်တိုက်, ပြတိုက်, ရုံးအဆောက်အဦးများအဖြစ်ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များအားဖြင့်တားမြစ်ထားသောသောနေရာများဖြစ်သည်။
ဒါဟာအသက် 18 နှစ်ပြည့်နှင့်တစ်ဦးလောင်းကစားရုံများတွင်ကစားရန် 21 နှစ်ပတ်လည်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ကြပြီမဟုတ်သူကိုလောင်းကစားဝိုင်းပုဂ္ဂိုလ်များတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်တားမြစ်ထားသည်။
လောင်းကစားဝိုင်း၏အော်ပရေတာများ၏လူမှုရေးတာဝန်ယူမှုတစ်ခုထပ်တိုးယန္တရားဂျော်ဂျီယာ၏ဘဏ္ဍာရေးစောင့်ကြည့်ဝန်ဆောင်မှုအနေဖြင့်, သင်တန်းသားများကိုလောင်းကစားဝိုင်းဖြုန်းကြောင့်ငွေသားပမာဏကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဂိမ်းတစ်ခုချင်းစီစည်းရုံးရေးမှူး gel3တထောင်ထက်ပိုပြီးလောင်းကစားအပေါ်ဖြုန်းခဲ့သူဝန်ဆောင်မှု၏လူအများ၏ကိုယ်စားလှယ်များအကြောင်းကြားဖို့တာဝန်ရှိကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့လျှင် / $ 1243 ။ အော်ပရေတာမှဤအချက်အလက်ပေးမ Service ကို 2-6 တထောင်ကနေ gel ၏ပမာဏအတွက်ဒဏ်ငွေနိုင်ပါသည်။ / $ 830-2490 ။ ဂျော်ဂျီယာ၏ပိုင်နက်အတွင်းမည်သည့်လောင်းကစားဝိုင်းအတွက်ပါဝင်ကနေတားမြစ်ထားသောနေသောပုဂ္ဂိုလ်များစာရင်းတစ်ခု - အာရုံကိုခံထိုက်သောဒါခေါ်အနက်ရောင်စာရင်း၏ဘဏ္ဍာရေးစောင့်ကြည့် of Service ကိုဖန်ဆင်းခြင်းသည်။ ဤစာရင်းတွင်အဓိကအားဖြင့်အမျိုးမျိုးသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်အုပ်စုများနှင့်ရာဇဝတ်ဂိုဏ်းကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်သည်။
ဂျော်ဂျီယာအတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာရုပ်မြင်သံကြား, ရေဒီယိုနှင့်အခြားမီဒီယာပေါ်လောင်းကစားကြော်ငြာတွေကိုပိတ်ပင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးမှုများရှိပါတယ်။ ယခုမူကားထိုကဲ့သို့သောကြော်ငြာများ၏အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးအထွေထွေလူဦးရေအဘို့အထောကျပံ့မတှေ့ဘူး။
0.1 ထိပ်တန်း 10 ဂျြောဂြီယနျအွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များများစာရင်း
3 ဂျော်ဂျီယာအွန်လိုင်း - ဂျော်ဂျီယာမှာရှိတဲ့လောင်းကစား
3.0.1 ဂျော်ဂျီယာတွင်အွန်လိုင်းလောင်းကစား - သမိုင်းနောက်ခံ
3.1.2 Asia ၏မြေပုံပေါ်တွင်ဂျော်ဂျီယာ
3.1.3 Tbilisi ဆွဲဆောင်မှု
3.2 ဂျော်ဂျီယာမှာရှိတဲ့ကာစီနို: အခွန်
mandarin နန်းတော်လောင်းကစားရုံအဘယ်သူမျှမသိုက်ဆုကြေးငွေ 2020